नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने निर्णय, कुन देशमा कति उडान ? हेर्नुहोस् – Daily NpNews
वास्तुअनुसार सिरानी मुनि यी कुरा राखेर सुत्दा मिल्छ फलिफाप, तपाई राख्नुभयो त ?
पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन, माघ १० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
काखीमुनिको भाग कालो देखि थाल्यो ? हुनसक्छ थाइराड र मधुमेह जस्ता रोगको खतरा !
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने निर्णय, कुन देशमा कति उडान ? हेर्नुहोस्
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने निर्णय, कुन देशमा कति उडान ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ / सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गरिएका मुलुकबाट थप उडान अनुमति दिने भएको छ । यसअघि दैनिक ८०० यात्रु मात्र ल्याउने गरी निर्धारण गरिएको कोटा हटाएर पिसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गरिने भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र श्रममन्त्रीबीच आज भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बीचको उच्चस्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या थप गर्ने समझदारी भएको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नियमित उडान शुरु भएका मुलुकबाट आवश्यकताका आधारमा यात्रु ल्याउन सकिनेछ । कुनै कम्पनीले कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने छ । श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वयमा उडानको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
नियमित उडान नभएका मुलुकमा पिसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुका लागि मागका आधारमा उडान सङ्ख्या थप गरिने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारले आफ्नो प्रयत्न बढाउँदै जाने बताउनुभयो ।
१९ वर्षीया सपना रोका मगरलाई यो फेरि एक्कासी के आइलाग्यो यस्तो ?
फेरी शोकमा डुब्यो बलिउड, अभिनेत्री मुखर्जीको निधन
नेपालले जुटायो लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको हो भन्ने यस्तो ऐतिहासिक प्रमाण